Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Haddii aad hadda uun bilowday qorsheyneysa safar marayo Bavaria ee Germany, aad u badan tahay in fikirka ku saabsan faahfaahin ah. Waxaad u badan tahay dabooshay tirada sheer meelaha la yaab leh in ay booqasho. Plus, aad rabto in aad iyaga ku habboon oo dhan in a 10 maalmood faahfaahin…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo lover kasta oo khamri run ogyahay in magaalooyinka khamri Yurub bixiyaan khamri la awoodi karo oo la yaab leh. From France Italy, oo dheeraad ah, dalalkaas waxaa loo aqoonsaday by badan oo ay leeyihiin raagay ugu fiican adduunka. In ka qayb, this is due to the ideal climate growing…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waxaa jira dareen ma la midbaa Ruux seexan on tareen si tartiib ah u dhaqaaqin iyo tooso subaxdii dambe meesha aad u socoto, Diintooda daqiiqo ka dhaadhacyadii. In Europe, Waxaan nahay boobsiyo xulasho markii aan raadineyno meelaha ugu wanaagsan ee 'Ski Resorts' oo tareenka lagu booqdo. It’s not…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Backpacking waa mid ka mid ah siyaabaha ugu xiiso leh in ay u safraan, iyo sabab wanaagsan. Xorriyadda qabo alaabtaada oo dhan aad dhabarka iyo bootimaalaysiga ka tareen si ay u tababaraan iyo dal ilaa dal waa waayo-aragnimo cajiib ah. Tan iyo markii this waxa uu noqday sidaas oo caan ah, anaga…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Beri baa ah, marka miisaaniyadda ma door doorashada dalal (ama ugu yaraan, ma aha sida weyn u door!) wax ahaayeen fudud; maalmahan, haddii aan rabno in aan u safro, we have to be smart with the way we handle our…